အပေါ်မယ့်အရာကိုရှင်ဘုရင်? ငါမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းလည်းပါပါတယ်အားလုံး၏နောက်ဆုံးနာရီအနည်းငယ်သင့်အသက်တာ၏အတှေ့ဖို့ကြိုးစားနေကောင်းတစ်ဦးပွဲချင်းပြီးအတွက်သင်ျဂိမ္း:အကြောင်းရင်းဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကသင်အထောက်အကူအတွက်အဆုံးသတ်ကြောင်းရှာ! ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳအကောင်းဆုံးအအရွယ်ရောက်ပြီးသူမိသားစုအားကစားပြိုင်ပွဲ:ငါသည်အဘယ်သို့စဉ်းစားခံရဖို့အင်တာနက်ရဲ့အကောင်းဆုံးအချက်အချာသူမည်သူမဆိုချစ်ထိပ်တန်းအရည်အသွေး XXX။ ကျနော်တို့အပေါ်အကြွင်းမဲ့ပျက်ခွဲနောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်ပြသရန်လူတိုင်းမှကြွလာသောအခါအများထုတ်လုပ်မှုတားမြစ်ထားပါတယ်ဂိမ်း၊အဘယ်သူမျှမအထက်သာ။, ကျနော်တို့စိတ်ချယုံကြည်ကြောင်းအချိန်ဖြုန်းပြီးနောက်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း၊သင်ဖွင့်ကြည့်ဖို့သွားကြသည်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အဤအစစ်အမှန်သဘောတူကြောင်းတတ်နိုင်င့်ချိတ်ဖို့လူတိုင်းနှင့်အတူတက်ကြီးကျယ်ဆုံးပစ္စည်းလူအားလူသိများ။ ဒါဟာလူသိများပြားအားဖြင့်သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ျအရေးယူခြင်း၊ရှာဖွေခြင်းစံညမ်းဗီဒီယိုများမဟုတ်ကြောင်း။ ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်ရွေးချယ်မှုများထွက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်၊ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကတယောက်မျှမရှိနေသောကြောင်းနစ်မွာသင်ဖွယ်ရှိဖုတ္စက္။, အကောင်းဆုံးအအရွယ်ရောက်ပြီးသူမိသားစုကဒီမှာအကုန်ရှင်းပြမယ့်အကြီးမြတ်ဆုံးအစုအသင်ျဖြန့်ချိသောအားလုံးသည်အာရုံစိုက်နှင့်အဓိကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပတ်ပတ်လည်အမာခံလိင်အကြားမိခင်တွေ၊သားတွေ၊အစ်မတွေ၊သမီးတွေ၊အဖေနှင့်ဒေါ်။ ဘာပဲရရှိကြောင်းသင်ခက်တယ်လေ! ဒါကြောင့်၊သင်လေ့လာလိုလျှင်သင်ပိုမို၊အောက်တွင်ဖတ်ပါ၊ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးတက်လက်မှတ်ထိုးအခုအချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရဖို့တစ်ဦးအချပ်ကိုပိုင်။
ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးအရာအဖော်ပြရန်ချင်၊သင်ဖို့အကောင်းဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူမိသားစုကလုံးဝအခမဲ့ကစားရန်။ အဲဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ကောင်းစွာသင်မည်မဟုတ်ဖို့ဖိအားပေးပြီးငွေရှာနိုင်ရန်အတွက်ဝင်ရောက်ခွင့်အဘယျသို့အတွင်းအကောင်းဆုံးကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူမိသားစု။ အကြောင်းရင်းကကျနော်တို့ဤအမှုကိုပြုသောကြောင့်အများကြီးရှိပါတယ်လိမ်လည်ထွက်ရှိပြီးရလဒ်အနေနှင့်၊အများကြီးသံသယဝါဒီမဟုတ်ကြဘူးသောသူအထင်ကောင်းတစ်ဦးရဲ့စိတ်ကူးသင်တို့အဘို့အလက်သင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံကျော်ဖြည့်စွက်ရန်စိမ်းမသိလျှင်အဘယ်အရာကိုသင်ရတာပေါ့။, သီလအားဖြင့်သောအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အကူအလုံးဝအခမဲ့သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု၊အဘယ်သူမျှမအန္တရာယ်အကြောင်းသင်ရမယ့်နေမျိုးသို့မဟုတ်ဘေးဒဏ်သင့်အတွက်မည်သည့်အနုတ်လက္ခဏာလမ်း။ ကၽြန္ေတာ္တိုဘွေကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချဤအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းကိုရှေ့ဆက်ပြီးသုံးဖြုန်းလိမ့်မယ်အချိန်အများကြီးကျော်ကိုလာမယ့်နှစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မော်ဒယ်ကိုအဖြစ်၊ကျနော်တို့တစျနေ့ကမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်း၊အနာဂတ်၏စက်မှုလုပ်ငန်း။, အကောင်းဆုံးအအရွယ်ရောက်ပြီးသူမိသားစုအားကစားပြိုင်ပွဲရှာဖွေနေသည်တည်ထောင်ရန်ကိုယ်တိုင်ကအဖြစ်သွား-မှအစက်အပြောက်များအတွက်အွန်လိုင်းသင်ျဂိမ်းနှင့်ဤသို့ဝေး၊ကျွန်မတို့စီမံခန့်ခွဲမယ့်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့လူအများကြီးကကျွန်ုပ်တို့၏နည်းစနစ်အကြောင်းလက်လှမ်းအဝေးသာလွန်တစျခုအတွက်ဖောက်သည်။
လျင်မြန်တဲ့အကြည့်ကိုယူမှာနမူနာပစ္စည်းများအတွက်ခရီးစဉ်ပါဟုမပါဘဲဒါဟာဝင်အကောင်းဆုံးအအရွယ်ရောက်ပြီးသူမိသားစုဂိမ်းအမှန်တကယ်ဂရုစိုက်ပေးခြင်းအကြောင်းသင်အကောငျးဆုံးအမြင်များ။ ကျွန်တော်တို့သုံးစွဲမယ့်အချိန်အကြာကြီးဆိုတော့ဒီဂိမ်းကြည့်ဖို့အဖြစ်အရည်ရွှမ်းအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှထိုသို့ပြသသာအဆုံးထုတ်ကုန်။ အခါကျနော်တို့ပြန်ကြည့်သမိုင်းကြောင်းမှာအပြာဂိမ်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊အနိမ့်အရည်အသွေးလွှတ်ပေးမှုတော်တော်ကြီးမားဆုံးပြဿနာကကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်ပြဿနာမှကြွလာသောအခါညမ်းဂိမ်းများ၊လူအများစုကမဟုတ်ကယ့်ကိုကဒီမှာအဘို့အမော်ကွန်းပုံပြင်၊ကြီးသောတိုက်ခိုက်ရေးသို့မဟုတ်အခြားသူဘာပဲကိုအခြားခေါင်းစဉ်။, ခင်ဗျားဒီမှာမြင်စေသည်တစ်ခုခုသင်ပယ်တွင်လူရှုပ်နှင့်အရန်မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်၊ပိုကောင်း! အကောင်းဆုံးအအရွယ်ရောက်ပြီးသူမိသားစုအားကစားပြိုင်ပွဲလိုလားဆိုတာကိုပြသတာအနက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတိကဝတ်ကိုဒီနဲ့အမြဲအဆက်အပူဆုံးအမြင်များ၊ပတ်ပတ်လည်လာမိုးလာသည္။ ဒီတော့သေချာပါစေအခမဲ့အကောင့်ကိုရရန်ဒီနေ့နှင့်ကိုယ်အဘို့မြင်အကြားကွာခြားချက်ကအမေရိကန်နှင့်အခြားလူတိုင်းထွက်ရှိပါတယ်။, လုံလောက်ကြောင်းပြောရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမပြုမိသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ–ဆိုဂိမ်းကစားနှင့်အတူကောင်းတစ်ဦးအစုံအလုပ်အဖွဲ့၏မျက်စိဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်းသိနားလည်မှကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုလုပ်နေတာအမှန်တကယ်ထူးခြားတဲ့နှင့်အထူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူညစ်ညမ်းသည်။ ကျနော်တို့ဒီစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးအဆင့်သစ်မှအဆင်းလှသောနှင့်အမြင်အာရုံကာမဂုဏ်။
အားလုံးရဲ့ရရှိပါသည်အချိန်၌shilling ဒီမှာ။ သင်ပြောပြနိုင်၊ကျွန်တော်အသည်းအသန်ဂိမ်းကစားသောအချစ်အရာအားလုံးကိုအကောင်းဆုံးအအရွယ်ရောက်ပြီးသူမိသားစုဂိမ်းကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိပါတယ်၊နှင့်ဤအကြောင်းကြောင့်၊ငါထင်တာအကောင်းဆုံးဖန်တီးလျှင်သင်အကောင့်တစ်ခုအခုအချိန်မှာနိုင်ရန်အတွက်လက်လှမ်းအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ရှိသည်။ ရည်ညွှန်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စနှင့်အနည်းငယ်ပြီးနောက်မိနစ်၊သင်ရပါလိမ့်မယ်အတူမေတ္တာ၌လဲကျပြီးအရာအားလုံးကိုအကောင်းဆုံးအအရွယ်ရောက်ပြီးသူမိသားစုဂိမ်းများများအတွက်ရပ်တည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တစည်းကိုအဘို့စစ်ဆေးနေပြီးထွက်လာပြန်မည်သည့်အချိန်သင်၏လက်ကိုရဖို့ရန်လိုအပ်အရာတစ်ခုခုအပေါ်အမှန်တကယ်အထူး။, ကျနော်တို့စေလွှတ်မည်ပါလိမ့်မယ်သင်အပေါ်တစ်ဦးညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းအဖြစ်အပျက်၏အကြိုက်ရာအမည်ရနိုင်သည်။ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင့်ရဲ့ဆက်လက်ထောက်ခံပံ့ပိုး–ကျနော်တို့အချစ်တိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်အများကြီးအဖြစ်သူတို့ချစ်ပူသင်ျလိင်!